Maxay ka wada hadleen Axmed Madoobe iyo Guddoomiyaha ONLF? (Akhriso) – Radio Daljir
Maxay ka wada hadleen Axmed Madoobe iyo Guddoomiyaha ONLF? (Akhriso)
Nofeembar 28, 2019 7:47 b 1
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa saaka gudoomiyaha Xisbiga ONLF iyo xubno kamid ah wafdigiisa kula kulmey magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Kulankan oo ahaa Hambalyo madaxweynuhu ugu hambalyeynayay doorashada gudoomiyaha cusub ee xisbiga ONLF mudane Cabdiraxmaan Maadey oo dhawaan la doortay.
Kulanka ayaa waxaa ay uga wada hadleen is xogwareysi dhanka siyaasadda geeska Afrika iyo iskuwadida bulshada dal iyo dibadba ayaa waxaa ay isla forfeeyeen sidii loo ilaalin lahaa isku duubnida ummada Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Jubbaland axmed Madoobe oo weli ku sugan Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa la filayaa in sidoo kale uu halkaasi kulamo kala duwan kula qaato Siyaasiyiinta Soomaalida ee ku sugan dalkaas.
Waraysi: Abshiro Cabdisalaan oo loo doortay guddoomiyaha Ardayda Jaamacada Bariga Afrika ee Garoowe (dhegayso)
Kenya oo dhaqan galinaysa heshiiskii ay dowladda Soomaaliya kala saxiixdeen
ONLF WAY DEGDEGAYSAA.
BANOONIGA DAJIYA YAA DHAHA.